Ra’iisul wasaare Kheyre oo si heersare xafiiskiisa ugu soo dhaweeyay wafdi ka socdo Midowga Afrika (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo si heersare xafiiskiisa ugu soo dhaweeyay wafdi ka socdo Midowga Afrika (SAWIRO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa si heersare xafiiskiisa ugu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo madaxa ammaanka Midowga Afrika Danjire Ndumiso Ntshinga, kuwaas oo muddo seddax cisho ah booqasho ku joogi doonno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
Danjire Ndumiso Ntshinga ayaa kulan kala duwan la qaatay ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Labada dhinac ayaa kulamadooda uga wada hadlay sidii loo horumarin lahaa howlaha ciidamada AMISOM ay ka hayaan koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa ciidamada Soomaaliya, si mustaqbalka dhaw ay u hantaan amniga dalkooda.
Wafdiga Danjire Ndumiso ayaa sidoo kale kormeer ku tagay xeryaha ciidanka Midowga Afrika ee magaalada Muqdisho, iyagoona kormeer kusoo sameeyay heerka uu gaarsiisan yahay wada-shaqeynta ka dhaxeeysa iyaga iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dagaalka xoogan kula jira Xarakada Al-shabaab.
Si kastaba ha ahaatee, booqashadaan Muqdisho ee wafdigaan ka tirsan Midowga Afrika ayaa imaanaya xilli muddo 10 sano ah ay dalka Soomaaliya ku sugan yihiin ciidamada AMISOM, islamarkaana dhawaan muddo kordhin loo sameeyay in ciidankaasi ay sii joogayaan Soomaaliya.